Fabrice Meuwissen milaza
Martsa 14, 2012 amin'ny 4:20 am
ela velona ny transposh, na dia mitaraina, Mbola mampiasa azy 🙂
Tsy vaovao farany Version mbola ny farany toy izany no maso
Martsa 27, 2012 amin'ny 2:27 aho
Tsy vaovao farany izany ankehitriny, satria tsy fantatro akory asa vaovao, raha oharina amin'ny taloha Malagasy. Ary ianao afaka manampy ny asa izay mety ho isan-pejy ho tena .html pejy, mety ho haingana kokoa WordPress..
Misaotra betsaka enao..
Martsa 27, 2012 amin'ny 10:53 aho
Fanavaozana ny ankapobeny zava-tsoa, momba manao azy io haingana, Mety mihevitra ianao mampiasa ny cache plugin (toy ny wpsupercache) izay mety hahatratra ny fanatsarana izay tadiavinareo.
Martsa 30, 2012 amin'ny 4:31 am
I mampiasa izany ho an'ny fotoana ela plugin. Fa ny fampiatranoana nilaza tamiko ny toerana be loatra CPU, plugin no mety mahatonga izao olana?
Mamerina ny fisaorana anao..
Martsa 31, 2012 amin'ny 2:28 am
Plugin io no manimba ny fotoana CPU, izay mety ho tanteraka mampihena rehefa mampiasa ny nanohana ho fahatsiarovana caching vahaolana, toy ny memcached na APC
dia afaka mangataka ny fampiantranoana izay ilaina momba ireo
Aprily 7, 2012 amin'ny 5:26 aho
Salama, Tsikaritro, fa taorian 'ny fiovam-teny manova ny toerana misy ny mpikambana nisoratra anarana amin'ny vahiny.
Ahoana no mamaha izany olana?
Aprily 28, 2012 amin'ny 11:42 am
Tsy azoko antoka no hahazo izay olana ianao tatitra, miezaka ny hanome bebe kokoa aho antsipirihany ka ho afaka hanampy.
Jona 17, 2012 amin'ny 8:02 aho
В WP 3.4 + Transposh 0.8.2 Tsy misy olana, mety antony dia WP.
Aprily 9, 2012 amin'ny 7:07 am
Great plugin, Milay izany.
Fa ny Syntaxe ny fandikan-teny dia tena tsy mahazatra, misy fomba hametraka faritra fehezan-teny any amin'izay tany hafa, rehefa nanova?
Aprily 28, 2012 amin'ny 11:39 am
Mbola miasa amin'ny izay, na izany aza misy ny vitsivitsy izay mety ho constants niova amin'ny an-tampon'ny ny parser.php rakitra, na dia izany no mety tsy ho tohanana amin'ny ho avy, ary dia mety hanafoana ny amin'izao fotoana izao teny.
Mey 2, 2012 amin'ny 3:43 am
Salama e ! Vao nanitsy ny frantsay dikan-ny lahatsoratra 😉 Manao ny tranonkala anjara lehibe hevitra, toy ny plugin no!
Maro Misaotra noho ny asa lehibe manampy antsika manokatra ny fiteny sisin-tany, Happy Birthday ary mba Transposh!
Mey 2, 2012 amin'ny 3:48 am
Oh an-dalana, eo amin'ny teny anglisy sy frantsay ny toerana ny teny and. Mpamaritra amin'ny teny no nivadika, ary ny trasposh ny fomba fanapahana sazy tena tsapaka, dia mahatonga ny sasany sazy feo c-format tsy misy fomba reordering teny araka ny tokony ho… Misy fomba mampiasa ny ponctuation mba hanapaka sazy ho tapa manapaka azy ireo fa tsy tena tsapaka?
Fisaorana indray 🙂
Mey 3, 2012 amin'ny 9:58 aho
Misaotra hanamboatra ilay frantsay Version, tena tia. Fikarakarana mba hanao toy izany ho an'ny plugin mihitsy?
Momba kisendrasendra fanapahana, tsy hoe kisendrasendra, dia hamono amin'ny HTML sampana, isa, punctuations sy ny HTML. Ireo no fitsipika izay afaka hovana ao amin'ny parser rakitra, ary isika no miasa amin'ny fanatsarana ny ankapobeny dingana. Ankoatra ny olana no resahina misy ny olana mifandray amin'ny manodidina toy ny teny amin'ny lafiny roa dikany sy ny lahy sy ny vavy ny olana amin'ny fiteny sasany. Dia ny valiny “Mbola miasa amin'ny izay”.
Misaotra ny fanehoan-kevitra sy ny fahan'ny
Mey 3, 2012 amin'ny 11:16 aho
Omeo ahy ny antontan-taratasy sy ny “fomba” ary Izaho hanao ny tsara indrindra mba handika ny plugin.
Olana iray hafa: sary izay tsy hita amin'ny teny Anglisy Malagasy / Frantsay iray. Afaka hijerena http://www.sahal.fr: ENG “About Alexandre Sahal” / FR “About Alexandre Sahal”
Mey 3, 2012 amin'ny 11:44 aho
Voalohany, momba ny tsy ampy sary. Ny foto-kevitra dia mampiasa zavatra antsoina hoe timthumb (izay mahatsiaro fiarovana dia olana amin'ny fotoana iray) ary misy ilana azy ihany koa ny mandany harena, Manoro hevitra aho mampiasa ara-dalàna sy ny zavatra sary tenifototra fotsiny dia mety miasa.
Momba fandikana ny plugin, ny antontan-taratasy dia efa voalaza ao izay anananao, ny fomba tsotra indrindra noho ny fandikana ny .po / .mo raki-daza hatrany hitako izany dia ny mampiasa ny plugin antsoina hoe “codestyling-toerana” izay tena nizotra tamin'izay hitsiny avy.
Koa isika rakitra kely mba handika ho amin'ny Ovay interface tsara ao amin'ny JS / fanononana Directory.
Mazava – moa no nomena ny mpandika teny 😉
Mey 16, 2012 amin'ny 10:46 aho
Hi no toa manana olana fa mahaliana, dia toa ny ankamaroan'ny fiteny (Afrikaans, Íslenska and more) manome olana ary tsy nandika ny sakafo entana, ary ny lohateny mihitsy, ary manolo ny soratra amin'ny na inona na inona.. dia misy na inona na inona marina amin'ny biriky ao aminy.
Tamin'ny voalohany nihevitra izany aho dia vokatry ny cufon, fa indray mandeha aho, namboarina izany mba hanaisotra cufon fiteny rehetra afa-tsy ny Default. fa ny mbola mitranga.
Nahoana izany no hitranga?
Afaka mampiasa ny Google API fototra vahaolana ity olana ity?
Misaotra misy fanampiana
Mey 20, 2012 amin'ny 10:33 aho
Rehefa avy nanaisotra cufon fa tsy Default teny, manana fandikan-teny mandeha ho azy no nanala Database sy ny caches ho an'ny antoko faha-3 WordPress utils?
Amir Colnect milaza
Jona 29, 2012 amin'ny 2:43 am
Manantena ny ho avy fivoarana sy ny vaovao farany avy any Transposh. Azo antoka Izany dia midika hoe mandeha ho lalao fiovan'ny vokatra tanteraka indray mandeha 🙂
Jolay 24, 2012 amin'ny 12:45 am
Izany no tena tsara plugin…Feno fankasitrahana aho m..
Te-hanontany Ahoana no mety hanova ny endritsoratra ny lahatsoratra nadika hita…
Ohatra…Raha tàhiny aho teny Anglisy sy Grika…Ahoana no manova ny endri-tsoratra grika family (ny Arial mamela hoe – mahatonga ny Default azy miakatra amin'ny fianakaviana serif).
Misaotra…amin'ny zavatra rehetra…
Novambra 21, 2012 amin'ny 10:13 aho
Ny plugin lehibe.
Desambra 5, 2012 amin'ny 1:45 aho